गुल्मी पुगेका राजेश हमाल पहिरोको बिचमा फसेपछी……. – Gulminews
Home/मनोरन्जन/गुल्मी पुगेका राजेश हमाल पहिरोको बिचमा फसेपछी…….
गुल्मी पुगेका राजेश हमाल पहिरोको बिचमा फसेपछी…….
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ आश्विन १२, बिहीबार ०९:५९ मा प्रकाशित
गुल्मी,असोज १२ । गुल्मीको एक कार्यक्रममा आइपुगेका महानायक राजेश हमाल सदरमुकाम तम्घास नजिकैैको सुख्खा पहिरोको बिचमा अलपत्र परेका छन् । तानसेन सड्क खण्डको बिचमा पर्ने रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित दुबीचौरको भँगेरीमा सख्खा पहिरोले सवारी साधान आवत जावत गर्न नसकेपछी नायक हमाल अलपत्र पर्नु परेको हो ।
धुर्कोट वडा दशैं मेलाको अन्तिम दिन हमाल पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । अन्य कुनै बिकल्प नभएपछी नायक हमाललाई पहिरोभन्दा माथी आधा घण्टाको उकाले हिँडाएर दुबीचौरको घोर्ले सम्म ल्याउने र प्रहरी प्रशासन सहयोगमा धुर्कोट लैजाने तयारी गरिएको छ । उनलाई सदरमुकामबाट कार्यक्रम स्थलमा लैजाने जिम्मा लिएका यसै समाचारदाता सँग टेलिफोन सम्पर्कमा नायक हमालले आफु हिडेर पनि धुर्कोट जान तयार रहेको बताएका छन् । उनि सहित दशैं मान्न आएका सयौं यात्रुहरु हिडेर घोर्ले सम्म आई अर्को गाडी चढने गरेका छन् ।
सड्क खुलाउन रेसुङ्गा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन,जिल्ला प्रहरी,ट्राफिक प्रहरी,शसस्त्र प्रहरी लगायत खटिएका छन् । बिहानै देखि सड्क खुलाउन खटेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र पन्थीले डोजरले सोर्दै र माथीबाट झन ठुलो पहिरो खस्दै छ यसर्थ पनि यति समय पछी सड्क खुल्छ भन्ने अबस्था नरहेको बताए ।
उनले नायक राजेश हमाल देसकै गहना भएकोले जसरी पनि कार्यक्रम स्थल सम्म पु¥याउने पहल भइरहेको जानकारी दिए । रेसुङ्गा नगरपालिका मेयर डिल्लीराज भुसालले सड्क डिभिजन कार्यालयबाट २ वटा डोजर मगाएर धमाधम काम भइरहेको थप पहिरो नझरेमा करिव ३ घण्टा पछी एकतर्फी खुलाउने पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख डोरबहादुर थापाले सिमीचौर रिडी खज्याङ्ग सिमीचौर हुँदै तम्घासको बैकल्पी मार्ग रोज्न यात्रुहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनि एक हप्ता देखि त्यहि सुत्ने बस्ने गरि खटेका छन् । उक्त पहिरोलाई काठमाडौं जाने सड्कको एक समयमा भनिने कृष्ण भिरको संज्ञा दिईएको छ ।
माथीबाट पहाड भासिएपछी ठुलै पहरो सड्कमा आएर बसेको छ । डोजरले निरन्तर माटो फाल्दै छ तर त्यो भन्दा वढी माटो बगेको बगै छ । उक्त सड्कको १ वर्ष पहिले बिस्तार गरिएको थियो । सड्क बिस्ताको क्रममा भौगोलिक अबस्था नहेरी डोजरले कटान गर्दा अहिले ठुलो समस्या झेल्नु परेको स्थानियको गुनासो रहेको छ । डोजर चालक दशैं मनाउन घर गएपछी निर्माण व्यावसायी चुराबहादुर खत्री आफै सड्क खुलाउन डोजर चलाई रहेका छन् ।